Magnolia Suite, eCasa Torralbo
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJessica Y Gloria
Indawo ekhululekileyo nethe cwaka enendawo yokuhlala yabucala eHostal Los Torralbo, kunye nesidlo sakusasa esibandakanyiweyo ukulungiselela ugcino ukusuka nge-25. Feb. 2020. Ifakwe kwindlu yeendwendwe ecaleni kwekhaya lomamkeli zindwendwe, kwigadi yaseCuba enetropiki, enenzolo eninzi kunye nobutofotofo. I-Suite ibandakanya: Ifriji, i-Air conditioning, isomisi seenwele, isepha, ishampu, iitawuli ezinkulu nezincinci, amashiti, njl. Ekufikeni kwethu siyakwamkela ngeziqhamo ezitsha zesmoothie. Sihamba ngemizuzu engama-20 ukusuka kumbindi weCamagüey.
I-Suite inomnyango ozimeleyo kunye ne-terrace yangasese eqinisekisa ubumfihlo obukhulu. Imiqamelo kunye nomatrasi mitsha kwaye ikhululekile. Indlu yokuhlambela iphelele kakhulu kwaye intsha, kunye nazo zonke iinkonzo zehotele: i-hairdryer, iithawula ezinkulu nezincinci, isepha, njl.
Kwiigadi zethu ezitshisayo uya kufumana iindawo ezininzi zokuphumla apho uya kufumana uxolo oluninzi kunye nokuzola. Iigadi zethu zineendawo ze-orchids kunye neefern ezinkulu, njl. Ngokungathandabuzekiyo indawo efanelekileyo yeendwendwe ukuba ziphumle kwaye ziqhubeke nohambo ngeebhetri ezitshajiweyo.
Ubumelwane baseLa Vigía yindawo yokuhlala kunye neyokuthula, kodwa imizuzu embalwa uhamba ukusuka kumbindi wedolophu kunye nemizuzu emi-5 uhamba ukusuka kwi-artery enkulu, eyiBoulevard de la República Street.
Umbuki zindwendwe ngu- Jessica Y Gloria
I-Suite ikwindlu eyahlukileyo ukusuka kwindlu enkulu, ngoko iindwendwe zinobumfihlo obupheleleyo kunye nokuzimela, kodwa sisondelene kakhulu kwaye sihlala sifikeleleka kwiindawo eziqhelekileyo, kuyo yonke into abayifunayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Camagüey